English Dictionary အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
စာအုပ်များ နှင့် အညွှန်း
6.0-6nhj for Android
4.7 | 10,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် APK（39.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် English Dictionary - Offline
Offline English အဘိဓာန်
application သည်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြသည်။ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးဒီးယားကို အခြေခံ.
ကိုအခြေခံသည်။ မြန်ဆန်စွာရှာဖွေခြင်း, လွယ်ကူပြီးအလုပ်လုပ်သော User Interface, တက်ဘလက်များအတွက်လည်းအကောင်းဆုံး။
gr> ♦ကျော် 364000 ထက်ပိုသောအင်္ဂလိပ်အဓိပ္ပာယ်နှင့်အမြတ်အစွန်းများစွာ
symbring ♦? ♦> *
symber ကိုအက္ခရာစဉ်တစ်ခုအရအသုံးပြုနိုင်သည်။ Fullstop သင်္ကေတ။ စကားလုံးတစ်လုံး၏အဆုံးကိုမှတ်သားရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
♦ကျပန်းရှာဖွေရန်ခလုတ် (Shuffle) သည်စကားလုံးအသစ်များကိုသင်ယူရန်အသုံးဝင်သော♦ဝေမျှပါ။ Gmail သို့မဟုတ် WhatsApp များကဲ့သို့ MOUS Reader နှင့်သဟဇာတ Share Button မှတစ်ဆင့် fracewer နှင့်အခြား applications ♦ Local Memory, Dropbox နှင့် box များနှင့် boxs နှင့် boxs များနှင့် box များနှင့် bookmarks (သင့်ကိုယ်ပိုင်အကောင့်နှင့်အတူ configure လုပ်ထားမှသာ) BR> ♦> OCR plugin မှတဆင့် Camera Search ကို OCR plategin မှသာရနိုင်သည်။ (Settings-> Flowating Action ခလုတ် -> ကင်မရာ) ။ OCR plugin ကို Google Play မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည်။
.g. ကျေးဇူးပြု. 'Moon' ဖြင့်စတင်ရန်
နှင့် Dropdown List သည် 'လ' နှင့်စသောစကားလုံးများကို 'Moon'
♦စကားလုံးများကို SUTHIX, E.G. ကျေးဇူးပြု. 'Moon' ကိုအဆုံးသတ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု.
* Moon ကိုရေးပါ။
နှင့် dropdown list သည် 'လ' နှင့်အဆုံးသတ်သည့်စကားလုံးများကို "Moon '
စကားလုံးများကို" ။ wordsg. 'Moon' ကိုရေးရုံဖြင့်
နှင့် dropdown lists စာရင်းကို 'လ' ပါ0င်သောစကားလုံးများကိုပြလိမ့်မည်
user black and white the user defined text menu press menu:> Settings Settings -> Theme Settings -> Theme ကိုနှိပ်ပါ။ ) အောက်ပါလုပ်ဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခု - Search, History, အကြိုက်ဆုံး, ကျပန်းရှာဖွေခြင်းနှင့်မျှဝေ option ကို; အလားတူလုပ်ရပ်များနှင့်အတူ optional ကိုလှုပ်လှုပ်ရှားမှု။
♦ startup burning တွင်အလိုအလျောက် Keyboard ကိုရယူပါ။
အမေရိကန်လေ "ရွေးချယ်ခြင်းများအပါအ0င်မိန့်ခွန်းရွေးချယ်ခြင်းများ (စာနယ်ဇင်း Menu Settings) Took -> Select Language)
♦ History items History items History font items fem size font size font size and line right ♦♦ start up up option: default screen page, လတ်တလောစကားလုံး, ကျပန်းစကားလုံးသို့မဟုတ်စကားလုံး နေ့၏
♦ voice output? ဤနေရာတွင်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ http://goo.gl/axxwr
♦ဗြိတိသျှစကားလုံးအသံထွက်အလုပ်မလုပ်ဘူးလား။ ကျေးဇူးပြု. ဤနေရာတွင်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ https://cutt.ly/bemdcbr
♦မေးခွန်းထုတ်ခြင်းနှင့်အဖြေများ: https သင်၏ bookmarks နှင့်မှတ်စုများကိုစောင့်ရှောက်ပါ။ //goo.gl/d1lcvc
♦ application မှအသုံးပြုသောခွင့်ပြုချက်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကို http://goo.gl/asqt4c
သည် Google Play တွင် Google Play တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည် နှင့်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံ
Open Pop-up "Open Pop-up" ကိုနှိပ်ပါ။ "Open Pop-up" open "Open Pop-up" Open Open အဘိဓာန် "Open The Open" ⚠⚠ offline အဘိဓာန်လိုအပ်သည်။ သင့်စက်သည်မှတ်ဉာဏ်နိမ့်ပါက http://play.google.com/stancks.com/stapps/dets/details/details/details/details/details/details:
application developer များအတွက်သတင်းအချက်အလက် -
ap app သည် API ကို 3RD ပါတီ developer များအတွက်အဘိဓာန်ကိုပေးသည်။ ကျေးဇူးပြု. နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖတ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု. အသေးစိတ်ဖတ်ပါ။
ဤ application သည်အောက်ပါခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည် - br> ♢အင်တာနက် - မသိသောစကားလုံးများ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပြန်လည်ရယူရန်
rownternal_storage (AKA ဓာတ်ပုံများ / မီဒီယာ / ဖိုင်များ) - backup ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် bookmarks သို့
ဘာအသစ်လဲ English Dictionary - Offline 6.0-6nhj
♦ Corrected bug related to some plurals
4 Best Free Offline Dictionaries For PC Windows 10 Windows7Windows 8 Linux Mac To Look Up Words
Sinhala english dictionary software offline PC - Wanniya TEC
How To Download & Install WordWeb Dictionary In Windows 10 | Free Dictionary For Students & Teachers
Best offline dictionary app #offlinedictionary# #letscience
Best Offline English Dictionary for Android : Top 5
English Dictionary - Offline 5.2.4-2x7r
English Dictionary - Offline 5.2.2-1eha
English Dictionary - Offline 5.2.1-160f
Naing Lin Htun
I am so like it😊😊😊 Thank you so much for this app😊😊😊Great😍😍😍
Sett Ran Naing